Ehe, yemwedzi nemwedzi zviitiko zveChiitiko zvakasiyana kune wega mushandisi | Ndinobva mac
Kazhinji takabvunzwa kuti izvi zve matambudziko atinogona kuwana pamwedzi paApple Watch Uye chokwadi ndechekuti ino inonakidza sisitimu iyo Apple inoshandisa kupokana mumwe nemumwe wedu.
Kazhinji vashandisi vazhinji vanofunga kuti matambudziko aya akafanana kune wese munhu, asi izvi handizvo. Izvo zvinogara zvichitsamira pane zvinoverengeka zvinhu umo mushandisi wega wega anogara ari mukurumbira protagonist. Paunonyanya kufamba uye nemitambo yakawanda yaunoita, zvinonyanya kuomesa dambudziko rako uye izvi vanowedzera kuoma nekufamba kwenguva.
Pane zviitiko zvekuti munhu anogona kuwana dambudziko pakutanga kwemwedzi, panguva iyoyo kana tikagovana naye chiitiko ichi, tinogashira yambiro yekuti abudirira kuita "Kubvumbi" dambudziko uye isu ticha shamiswa kufunga kuti hazvigone kuve zvechokwadi, Ndichazadzisa sei dambudziko raApril 5 kana yangu iPhone ikaratidza kuti tinofanirwa kusangana neDaily Movement chinangwa ka23? Mhinduro kumubvunzo uyu ndeyekuti munhu wega wega ane zvinetswa zvake zvemwedzi uye pamwe munhu uyu aifanira kupedzisa iro Chiitiko ka5 kana imwe, saka vakatowana chinetso ichi.
Kana tichitaura nezvematambudziko emwedzi nemwedzi, hatisi kutaura nezve izvo zvipingamupinyi zvevashandisi veApple Watch (Dambudziko reMoyo Wemwedzi, Dambudziko repasi, Dambudziko reZuva reVakadzi Dzepasi ...) tiri kutaura nezvezvinetso pamwedzi zvinongoitika izvo zvinoonekwa mwedzi wega wega kutikurudzira zvishoma mukudzidziswa kwedu. Tinofanira kutaura kuti patinokunda matambudziko emwedzi nemwedzi anova akaomarara uye dzimwe nguva hazvigoneke kana kuita zvisingaiti. Zvese izvi zvinogara zvichitsamira pamushandisi uye huwandu hwekurovedza muviri kwavanoita muzuva ravo zuva nezuva, asi regai zvive pachena kuti yega yega ine dambudziko rakagadzwa neApple pane chiitiko chavanoita zuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ehe, yemwedzi nemwedzi zviitiko zveChiitiko zvakasiyana kune wega mushandisi
Aperture inomira kushanda mushanduro mushure pane macOS Mojave
Rubén Caballero, mainjiniya weApple's 5G modem yekuvandudza, anosiya kambani